Gịnị bụ Sola Wechsel? Nkọwapụta nke ụbụrụ ego
Malite mgbazinye ego Wiki promissory ndetu
promissory ndetu (nke a na-akpọkwa ụgwọ ụgwọ nke onwe), nkwa nke a na-emechi anya nke onye ngosi ahụ agbanyere na mgbanwe ego bụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ. Ihe ọmụma nke drawee na-akọwa anaghị etinye aka n'ihe gbasara ụgwọ nke ụgwọ nke onye, ​​kama nke nkwupụta, a na-enye ụgwọ nkwa ịkwụ ụgwọ na-enweghị atụ. N'ihi nke a, ụgwọ nke mgbanwe (nnata) na mbinye aka maka ịnakwere adịghị mma maka ego ndị sola, mana ndokwa iwu na-emetụta arịrịọ ahụ. Ụlọ akụ na-eji mgbanwe nke ndetu iji jide ihe ha kwuru megide onye ngosi. Ntugharị sola abụghị maka mgbasa ozi, n'ihi ya, a ga-agbapụta ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ihe si n'aka ụlọ akụ. A na-eji mgbanwe ego akwụ ụgwọ maka ego nke mgbazinye ego ahụ, na enwere ihe ize ndụ maka onye na-ejide ụgwọ mgbanwe ahụ, ya bụ ihe ize ndụ nke gbanwere ego ọhụụ ka ọ gbanwee ka onye akwụ ụgwọ ghara ime ya. N'ikpeazụ, a na - ekwenye na ọnwa atọ nke ịkwụ ụgwọ bụ nke a ebu-n'elu nwere ike ịgbatị. Ihe ize ndụ dị ọbụna ma ọ bụrụ na onye na-azụ ya, a na-akpọ onye na-azụ ndị ọrụ, ahazi ego nke mgbanwe na ụlọ akụ ya. N'ihe banyere mberede nke onye ahụ ji ụgwọ, onye nwe ụlọ ahụ ga-akwụ ụgwọ ahụ na nkwa ahụ. Onye natara arịrịọ ahụ nwere ike ịnakwere nke a dịka ụzọ ịkwụ ụgwọ ma mesịa gbaghaa ya na ụlọ akụ. Ụdị ego ndị a, nke a ghaghị ikwu banyere ụgwọ ego ahụ, na-akwụ ụgwọ na ụgwọ mgbanwe, mgbe a na-ebo onye ngosi ahụ n'otu oge.
Gịnị dị na Sola Wechsel?
Nke a promissory dee bụ irè ka a "sham" na ga-abanye na ike na ụbọchị kwetara n'agbata (aha nke onye nbinye) ma ọ bụ na ụlọ ọrụ nke e webatara n'okpuru iwu nke (State) bụ na n'isi ụlọ ọrụ dị (aha nke ụlọ ọrụ zuru ezu address) na (aha nke ha onwe ha ụlọ ọrụ dị ka na-agbaziri agbaziri na-ezu address. dị ka ihe kwesịrị ekwesị echiche nke undersigned gbaziiri kwere nkwa severally iji kwụọ nbinye nchikota nke (kpọmkwem ego)] na-enwe kwa afọ mmasị nke (mmasị ọnụego). dum ego na nweworo mmasị, dabere na Ogologo oge eji agbazinye ego ga-ezu oke ma mechaa kwụọ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ onye ọka iwu.
Kedu ihe kpatara ma ọ bụ megide mgbanwe sola?
Mere mgbanwe dị otú ahụ, e nwere ụfọdụ, ha mbio atụmanya nke a ụfọdụ na-eri ego ruo a mbara ize ọrụ nye site na nwoke ego alụmdi n'elu arịrịọ. Ke ụdị mgbanwe nke ụlọ akụ dị iche iche ihe na-atụle, karịsịa ma ọ bụrụ na nnyefe bụ ma zuru ezu, bụ mgbe adọ aka ná ntị n'oge a akụ mgbanwe: Mgbe ọgwụgwụ nke ofu mmasị ọnụego mgbanwe dị otú ahụ na a ole na ole pụrụ ịbụ ihe amamihe maka n'ihu ewu ego. Kpakorita na gị akụ banyere ihe kwesịrị ekwesị na ọnọdụ, inweta a akpachara anya Alternative awade ọzọ ego oru iji mgbe kpakorita mesịrị na akụ. Atụmatụ ahụ na-eche na ị matala ọnwa ole na ole tupu njedebe nke nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ. N'ihe banyere asọmpi n'ịntanetị, ọtụtụ ndị na-azụ ụlọ n'ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na gị iji nweta nkwekọrịta nkwekọrịta kacha mma. Interest ọnụego differentials iti na elu ego ichekwa ukwu beech, a akụ draft nwekwara ike ịkpalite ọzọ na-akwụ ụgwọ mgbe ndị na-ewu ego, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ndị ọhụrụ akụ ga-aha dị ka a ga-eme n'ọdịnihu ụgwọ ala aha na-eweta na-akwụ ụgwọ maka notari na ala aha.
Rating: 1.0/ 5. Site na votu 1.
Isiokwu bu nke aMietschuldner
Isiokwu ọzọndoputa mortgage